China grafayithi idiskhi electrode for ioyile spectrometer yoMvelisi kunye noMthengisi | Jinglong
Ngokuthelekisa amandla omqondiso wezinto ezikwisampulu yeoyile esetyenzisiweyo kunye nesampulu yokulinganisa esemgangathweni, uxinizelelo lwezinto zovavanyo kwisampulu yeoyile zinokubalwa, kwaye iziphumo zovavanyo zinokuba negalelo kwindawo yogcino lwedatha ukuze kwenziwe emva kwayo.
Idisk ye-electrode ekhethekileyo ye-oyilemeter ye-oyile ibe yinkqubo yokuphosa ubushushu obuphezulu, inefaniso elungileyo ye-porosity; isebenzisa ubunyulu obuphezulu begraphite (ubunyulu bokubukeka) njengempahla ekrwada, enophawu lwamandla aphezulu, ukuxinana okuphezulu, ubunyulu obuphezulu, uzinzo lweekhemikhali oluphezulu, uxinano kunye nolwakhiwo olufanayo, ukumelana nobushushu obuphezulu, ukuqhuba okuphezulu, njl .; ithobela ngokungqongqo imilinganiselo ye-Nb / SH / t0865 kunye ne-ASTM D6595.
Ubungakanani be-Disc electrode: ubukhulu bangaphandle be-12.5mm; ubukhulu bomngxuma ongaphakathi: 3mm; ubude: 5mm;
Ingcaciso grafayithi idiskhi electrode for spectrometer oyile:
Igama lesiNgesi: I-disc graphite
Umzekelo kunye neenkcukacha: ii-500 pcs / ibhokisi
I-disk electrode ekhethekileyo ye-spectrometer ye-oyile inemisebenzi emibini.
Isampulu kwibhokisi yeoyile ithwalwa isiwa phakathi kwedisk electrode kunye ne-electrode yentonga ngokujikeleza i-disc electrode;
Xa umthombo we-arc oscillating uqhagamshelwe, uyakuphendula nge-electrode yentsimbi ukuvelisa ubushushu obuphezulu kwangoko, umphunga kunye nokuzihlulahlula izinto ezikwisampulu yeoyile zibe zii-atom ezinobushushu, emva koko zivuselele ii-atom ezinobushushu ukuvelisa ulungelelwaniso lwento ebonakalayo.
Ukucoceka kwe-Electrode (ukungcola) yenye yezona zinto ziphambili zengxolo yangasemva;
Ukucoceka kwe-electrode kunye ne-porosity kuya kuchaphazela uzinzo lweqondo lobushushu, emva koko ukuchaneka kunye nokuzinza kweziphumo;
Isangqa sangaphandle sediski electrode siyakuchaphazela inani lesampulu ethwalwayo;
Ububanzi obungaphakathi be-electrode yediski buchaphazela izinga lokujikeleza kunye nenani leesampulu ezithwalwayo
Isitya esikhethekileyo i-electrode yeoyile ye-spectrometer;
Kusetyenziswa ukucoceka okuphezulu kwegraphite (ubunyulu be-spectral), eneempawu zamandla aphezulu, ukuxinana okuphezulu, ubunyulu obuphezulu, uzinzo lweekhemikhali oluphezulu, ubumbano kunye nesakhiwo esifanayo, ukumelana nobushushu obuphezulu kunye nokuqhuba okuphezulu;
Egqithileyo I-graphite rotor enganyangekiyo ye-graphite yokuhambisa amanzi e-aluminium
Okulandelayo: Iphepha elenziweyo lePhepha / ifilimu / iphepha
Ukucoceka okuphezulu kwe-Isostatic ngokucinezela iGrafite Rod
I-graphite electrode yesityalo sensimbi
Ikharbon yeCarbon ekhulelweyo
I-Spectrum echanekileyo yeGrafite Rod